Munaasabad lagu xusayay maalinta Calanka oo lagu qabtay Kuwait “Sawirro” – Radio Muqdisho
Munaasabad lagu xusayay maalinta Calanka oo lagu qabtay Kuwait “Sawirro”
Munaasabad lagu maamuusayay xuska maalinta calanka oo ku asteysan 12 Oktoobar ayaa lagu qabtay caasimadda dalka Kuwait.
Munaasabada waxaa soo agaasimey golaha hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, waxaana ka qeybgalay Danjiraha Jamhuuriyadda Federalka u fadhiya dalka Kuwait C/qaadir Amin Sheekh Iyo dhamaan diplomaasiyiinta Safaaradda iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kuwait mudane Maxamed Xaaji Axmed Khumeyni.
Gudoomiyaha Jaaliyaadda oo madasha ka hadlay ayaa ku baraarujiyey dhalinyarrada in ay qaataan doorkii dhalinyaradii ka horeysay ay ka soo qaateen dalkooda Iyo calankoodana difaaciisa u istaagaa.
Danjiraha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya u fadhiya dalka Kuwait oo khudbad dheer ka jeediyay halkaasi ayaa yiri “maanta dalkeenu waa uu sii horumarayaa maalinba maalinta ka danbeysa waddadii toosneydna cagta saarney, waxaan dhalinyarrada Kuwait ku boorineynaa in ay ka qeybqaataan horumarkaas socda isku duubnidda iy midnimo adag ee jaaliyaddana u gudbiyaan jaaliyaddaha kale iyo shacabka dalkeenba”.
Munaasabadaan ayaa ku soo idlaatey jawi farxadeed.
R/wasaare ku xigeenka oo ka qeybgalay shir looga hadlayay xaaladda xuquuqul insaanka dalka
Roob Mahiigaan ah oo ka da’ay degmada Mahadaay